» गोविन्दा कसरी भए ‘हिरो नम्बर वान’ बाट ‘जिरो’ ?
गोविन्दा कसरी भए ‘हिरो नम्बर वान’ बाट ‘जिरो’ ?
६ पुष २०७६, आईतवार ०७:३७
अभिनेता गोविन्दा बलिउडमा एक सुपरस्टारको रुपमा चिनिन्छन् । आफ्नो समयमा उनले कयौं सुपरहिट फिल्म दिएका छन् । तर, जसरी उनी एकाएक सफलताको शिखरमा पुगे त्यसरी नै ओर्लिए पनि । उनले आफ्नो स्टारडम लामो समयसम्म टिकाइराख्न सकेनन् । अहिले उनी बेरोजगार अभिनेतामा गनिन्छन् । उनलाई फिल्ममा खेलाउन कुनै मेकर तयार छैनन् ।
आफ्नै केही गल्तीका कारण गोविन्दाको स्टारडम ध्वस्त भएको बताइन्छ । २१ डिसेम्बर १९६३ मा जन्मिएका उनी शनिबारबाट ५६ वर्षका भएका छन् । रोमान्स, कमेडी, नेगेटिभ हरेक प्रकारको रोल निभाएका उनको पूरा नाम गोविन्द अरुण आहूजा हो । फिल्ममा प्रवेश गरेपछि उनले आफ्नो नाम गोविन्दा राखेका थिए । नाम परिवर्तन गरेपछि उनको भाग्य बदलिएको थियो ।
उनी अहिले काम विहीन हुनुको कारण फिल्ममा लिड रोल डिमान्ड गर्नुलाई मानिएको छ । उनका समकक्षी अभिनेता द्वय अनिल कपूर र सञ्जय दत्तले सपोर्टिङ रोलमा सफलता हात पारिरहेको अवस्थामा उनी भने लिड रोल भए मात्र काम गर्ने निर्णयमा बसेका छन् । तर, उनलाई लिड रोलमा लिएर फिल्म बनाउन मेकर तयार छैनन् । जसकारण उनको हातमा अहिले फिल्म छैन ।